Daawo Sawirada: Qaraxii xooganaa ee ka dhacay Albaabka Dekadda Muqdisho iyo Dhimashada oo sii korortay - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa saakay qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu saakay ka dhacay afaafka hore ee Dekadda magaalada Muqdisho gaar ahaan halka ay ku taal dhismaha Laanta Canshuuraha.
Qaraxan oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa loo adeegsaday gaari Caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, waxaana gaariga lagu qarxiyay goob ay dad badan ay fadhiyeen oo kutaala kasoo horjeedka Dekadda Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in goobta uu qaraxu ka dhacay ay aheed meel ay ku shaahayeen dad badan oo u badnaa xoogsato dakadda ka shaqeenayay, Ciidamo iyo dad kale oo doonayay in ay galaan Dekadda.
Inta ka badan 12-qof oo u badnaa shacab ayaa ku dhintay qaraxan xoogan ee ismiidaaminta ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad kale oo aad u badan kuwaa oo la dhigay xarumaha caafimadaka ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Degmada Xamar Jajab ayaa sheegay in ay socdaan gurmadka loo sameenayo dadka ay waxyeeladu soo gaartay, waxa uuna sheegay in dib laga soo sheegi doono qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan.
Ciidamada amaanka gaar ahana kuwa Nabad Sugida iyo booliiska ayaa gaaray halka uu qaraxu ka dhacay, waxa ayna ciidamada wadaan baaritaano iyo sidoo kale gurmad ay u sameenayaan dadka ay waxyeeladu soo gaartay.
Qaraxan xoogan ee maanta ka dhacay afaafka hore ee dekadda magaalada Muqdisho ayaa saameyn badan ku yeeshay howlihii shaqo ee ka socday gudahha dekadda, waxaana xiran wadooyinka gala iyo kuwa kasoo baxa Dekadda.